Ogaden News Agency (ONA) – Weerarada cusub ee CWXO uu fulinayo oo argagax ku abuuray cadawga
Weerarada cusub ee CWXO uu fulinayo oo argagax ku abuuray cadawga
Posted by ONA Admin	/ October 15, 2011
Ka dib markii kor loo qaaday tayada iyo tababarka CWXO oo lagu biiriyay ururo si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay inay fuliyaan hawlaha gaarka ah (commando operations), waxaa ciidamada cadawga lala beegsaday bilihii la soo dhaafay weeraro isdaba joog ah oo khasaare baaxad leh gaadhsiiyay cadawga. Hawlgalada ay naftood-hurayaasha ka fuliyeen meela kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa niyadjab weyn ku riday cadawga, sida ay ilo-wareedyo ka agdhow xafiisyada cadawga na soo gaadhsiiyeen in saraakiisha cadawga oo jahawareersan ay go’aano shacabka lagaga aargoosanayo qaateen kuwaasoo la fashilin doono.
Dagaaladii ugu dambeeyay een helnay waxaa ka mid ah hawlgal laga fuliyay Qolaji oo u dhexeysa Baabili iyo Jigjiga, halkaasoo ay CWXO dhabada u galeen baabuurta cadowga oo wadada socotay. Halbaabuur ayaa la burburiyey oo khasaare weyn lagu gaadhsiiyey wixii saarnaa.
29/9/2011 dagaal ka dhacay ceelka Eybar cade oo ka tirsan degmada Dhanaan waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
2/10/2011 waxay CWXO kamiin ka Kaleen wadada u dhaxaysa Docol iyo Shilaabo waxayna halkaas kaga dileen ciidanka cadawga 5 askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale. Waxay soo sheegeen dadka shacabka ah in 2dii bishan deegaanka Raaso ay weerar ku qaadeen dad shacab ah ciidamada ka amarqaata ina Iley oy halkaa ku dileen 3 qof oo shacab ah kuna dhaawaceen 8 kale. waxayna ay la wareegeen in ka badan 100 qori oo ay lahaayeen dadkaasi.
Isla 2dii Bishan baabuur ay wateen ciidamada cadawga oo si argagax wadada uga baxay meesha lagu magacaabo Uubataale waxaa ku dhaawacmay 11 dabaqoodhi.
5/10/2011 fal ay si badheedh ah CWXO uga fuliyeen suuqa maagalada Qoriile waxaa lagu dilay hal askari oo cadawga ah.
7/10/ 2011 dagaal ka dhacay ceelka caanka ah ee Bulaale waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 11 askari waxaana lagaga dhaawacay 15 askari oo kale
8/10/2011 dagaal ka dhacay magaalada Dhagaxle waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 1 askari mid kalana waa lagaga dhaawacay.
9/10/2011 dagaalka dhacay Maroodiga oo ka tirsan deegaanka Garbo waxaa cadawga lagaga dilay 2askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale waxaa jira xadhig iyo tacadiyo isugu jira jidh-dil iyo toogasho oo cadawga uu meela kala duwanoo dalka ka mid ah ka fuliyay. Tacadiyadaa uu cadawga kaga aargoosanayo dadweynaha shacabka ah ayaa hadda noqday qodob meela badan oo caalamka ah laga hadal hayo ka dib markii ay jaaliyadaha Ogadenya gaadhsiiyeen meela kala duwan.